Thenga i-dienolone powder (6218-29-7) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / abanye / I-Dienolone powder (6218-29-7)
SKU: 6218-29-7. Udidi: abanye
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwintlawulo ye-Dienolone powder (i-6218-29-7), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Dienolone powder (I-Dienolone (iTrnazone Tren X)) yinto yokwenza ama-anabolic-androgenic steroid (AAS) yeqela le-19-nortestosterone engazange ithengiswe. I-Dienolone ine-anabolic kwi-androgenic ratio ye-100 / 10 xa kuthelekiswa ne-methyl-testosterone, ibonisa ukuba i-anabolic enobulungisa kodwa ayiyona i-androgenic ...
Ividiyo yeDiololone powder
Dienolone powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Dienolone powder
I-molecular Formula: C17H22O2
umbala: Ukukhupha i powderstalline powder
Umjikelezo we-Dienolone powder
Amagama eKhemikhali: I-dienolone powder, ebizwa ngokuthi "tren".
Amanye amagama: okanye i-Dienolone powder, RU-3118, iTrnazone, iDienazone, iTrnazone Tren X
Ukusetyenziswa kwe-Dienolone powder
I-Dienolone powder eluhlaza (i-Dienolone powder (iTrnazone Tren X)) yinto yokwenza i-anabolic-androgenic steroid (AAS) yeqela le-19-nortestosterone engazange ithengiswe. Kuye kwafunyaniswa ukuba ilifa noFaro ngaphantsi kancinci ukwenzela receptor androgen (AR) kunye dlala receptor (PR) xa kuthelekiswa nandrolone in ibuzi kunye umvundla lolwabo bioassays, ngoxa trenbolone kwafunyaniswa ukuba ilifa oludla omnye AR njengoko Dienolone powder kodwa several- Ukunyusa ukwanda kwamanyathelo kwi-PR. Dienedione (i 17-nee-analogu of Dienolone ngumgubo ekrwada, okwabizwa ngokuba 19-okanye-4,9-androstadienedione) ekucingelwa ukuba prohormone ka Dienolone powder, ngoxa methylDienolone umgubo kunye ethylDienolone nomgubo okrwada Aas 17α-alkylated ngomlomo esebenzayo yezabelo of Dienolone powder. Ngokwahlukileyo, i-dienogest, i-17α-cyanomethyl yesiphumo se-Dienolone eluhlaza, i-progestogen enamandla kunye ne-antiandrogen.
Iziphumo eziqhelekileyo ziyahlukahluka ngokusekelwe kumyinge, nangona kunjalo kuma-dose amaninzi ama-Trenazone aya kuncedisa ngokunciphisa umzimba we-bodyfat, ukwandisa ubunzima be-muscle, ukwandisa ubungakanani be-muscular, ukuphucula ukuphucula, nokukhuthaza ukusebenza okunamandla.
-Ethanol non Its nzima kakhulu ukuba amanani iziphumo kuba Trenazone lidla ngokusetyenziswa ukuba kusetyenziswe ngaphezulu kwezinye izinto, kodwa uvelisa iziphumo ezibonakalayo ukuba ukutya, uqeqesho, nomthamo na indawo on.StackingTrenazone yinto Stacker edumileyo, kuba zona ivumela abasebenzisi ukudibanisa kunye ne-anabolic edibeneyo ene-methylated njenge-Epistane. Abasebenzisi abaqhelekileyo bafuna ukufaka le ngxube ngezinto eziphezulu ze-androgenic ukubonelela nge-analbolic / androgenic. I-Trenazone ingasetyenziselwa ngexesha lobuninzi okanye ukusika. Ngezantsi uludwe olufutshane lwe-anabolics eziningana I-Trenazone ijwayele ukufakwa kunye:
Ama-Methylated Compounds (i-Epistane, i-Methyl-Stenbolone, i-D-Plex, njl)
Izixhobo ezingezantsi-Methylated (iStanodrole, 1-DHEA, 11-oxo, njl)
Yiyiphi imilinganiselo ye-Dienolone powder
Ukukhethwa Kolu hlobo ludla ngokuphindaphindiweyo kunye nemveliso ye-methylated ngenxa yoko kwandisa ubuncinci bebindi. Ngokubanzi ne Trenazone 1-1.5ml ngosuku (75-112.5mg) yeyona idosi kakhulu ethandwa, kunjalo abanamava abasebenzisi abane elidlulileyo pro-hormone okanye nowokuluka amava steroid Ungabona iidosi e ngaphezu 2ml (150mg) day.Since nganye le inamehlo ayikho njengoko kunzima emzimbeni wakho kungenziwa kwandiswa kwii-8 iiveki ubude kunye nee-6 iiveki eziqhelekileyo. Uninzi lwabasebenzisi baya kuqalisa ukuphawula imiphumo yesonto lesithathu ngendlela yobunzima bomzimba / amandla okwanda. Abasebenzisi be-Novice mabahlale behlala kwiiyonke zee-dosing kwaye bangadlulanga iiveki ze-6 kumgama womjikelo, nangona abasebenzisi abanolwazi abanokukugijima ngokukhuselekileyo kwiiveki ze-8. Ukulungiselela amalungiselelo kunokuphila ixesha elide kakhulu, ngoko-ke ukusetyenziswa kweTrandzone kwakuba yinto efanelekileyo. Indawo efanelekileyo yokusebenzisa i-Trenazone yintamo, ingakumbi intamo ephantsi ngaphaya kwe-clavicle, ngasentla, emathangeni angaphandle, esifubeni, nasesisu.
Indlela i-Dienolone powder isebenza ngayo
I-dienolone powder (i-4,9-estraDienolone powder eluhlaza) yinto eyaziwayo "i-pre-precursors" ethandwayo. Ingqungquthela ye-steroid (i-methylDiololone powder) yafumaneka kwi-counter kwaye ithengiswa njenge-trenbolone yomlomo ngaphambi kokuba ivaliwe kunye nezinye i-steroids nezinye iprohormones ekuqaleni kwe-2005. I-Dienolone ipowder eluhlaza kunye ne-trenbolone zifana kakhulu kwisakhiwo, kodwa akufanele zibonwe zifana.
I-dienolone powder ine-anabolic kwi-androgenic ratio ye-100 / 10 xa kuthelekiswa ne-methyl-testosterone, ibonisa ukuba i-anabolic enobulungisa kodwa ingekho i-androgenic. I-dienolone powder ayiguquki kwi-estrogen, kodwa inomsebenzi othile weprogestational onokunyusa imiphumo ye-estrogen. Ngenxa yalesi sizathu, i-Dienolone powder eluhlaza ayifakwanga ngamanye ama-steroids okanye ama-prosthormones anesilinganiso esiphezulu sokuguqulwa kwe-estrogen. Njengohlobo lwe-trenbolone, i-Dienolone powder ingaba nohlobo lwe-thermogenic effect, ukwandisa ukulahleka komzimba kunye nokunceda umsebenzisi alahlekelwe ngamafutha omzimba. Ngokwenyani, i-Dienolone powder powder kufuneka ifaniswe ne-trenbolone okanye i-nandrolone ngaphandle kokuguqulwa kwe-estrogen.
I-dienolone powder ayifanele ibe yinto enzima ngokwemigca ye-androgenic okanye i-estrogenic side effects, kodwa kunye nayiphi na imiphumo ye-steroid kunye ne-orrogenic yinto enokwenzeka kwaye imiphumo ye-progenational ye-Dienolone powder i-powder yenza i-gynecomastia inokwenzeka. I-dienolone powder ayikho i-methylated ke ngoko xa ithathwa ngomlomo akufanele ibeke ubuninzi bexinzelelo kwisibindi.
Ngelishwa, ukungabikho kwendidi ye-C-17 ye-methyl eyongezelelweyo kubangela ukuba i-Dienolone ipowder ebomvu ibe nobutyebi obukhulu bokungabikho komlomo, ngoko oku mhlawumbi akuyona indlela efanelekileyo yokuthatha le steroid. Endaweni yoko, umntu uyafuna ukuthatha isandulela somlomo kwi-Dienolone powder eluhlaza. I-dienolone powder ingasetyenziselwa ngokuphumelelayo njenge-transdermal (ifunyenwe ngesikhumba), kwaye ifom ye-injection ye-steroid nayo ingasebenza.
Ukuqulunqwa ngokugqithisileyo "Ukutya uDkt. Tren" ngenxa yehlazo kunye ne-intanethi ye-colloquialism, i-Dienolone powder itholakala kwiklasi ye-Nandrolone ye-anabolic-androgenic steroids (AAS). Njengoko eli gama lichaza, i-Dienolone powder eluhlaza (A / A 100: 10) ibonisa iimpawu ezikhumbuza iTrenbolone (A / A 500: 500); nangona ubukhulu obuncinane kuneqela elizithandayo. Nangona kukho ulwahlulo olukhohlisayo kwiphepha, ukuphuculwa komzimba kunye namandla kunjalo kwiiprotokholi ezibandakanya i-Dienolone eluhlaza. Njengendlela yokuzimela, i-Dienolone powder ayinakho amandla olawulo lwe-hypertrophy yamacandelo afana ne-Testosterone, i-Oxymetholone, neMethandrostenolone. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwayo ngokufanayo kunye ne-androgen kunakhokelela kakhulu ekuphuhliseni ubunzima obubuthakathaka. Ngaloo nto, i-Dienolone powder powder izalisekisa indima ebalulekileyo ekuxhaseni amayeza, kodwa akufanele ithathwa njengesibini ye-steroid nayiphi na imilinganiselo. Ixabiso eliyinyaniso le-Dienolone powder kukuba ukudibanisa kwalo kukuphindaphindiweyo ngokuchasene nesongezelelo.
Nangona ukufana okukhona phakathi Dienolone ekrwada ibe luthuthu Trenbolone, ingxelo anecdotal ibonisa yangaphambili ukuba kude nokunyamezeleka okweSodom kuthelekiswa - ningaswele ingxelo icala elingenzi nto-: sokulibala, ukuba nochuku, ndlongo, ukubila ebusuku, "ft khohlo," njl iipropati ezinjalo ukuyilahla nekukholeleka ukuba kuxoxwa ngumbutho we-11-ene wesakhiwo seTrenbolone, esingekho kwiDienolone powder build. Kuyabonakala ukuba ezi zimbini zibonisa ukungafani okunamandla kwi-anabolic-androgenic ratios kunye ne-Dienolone eluhlaza powder ekhuthaza umgangatho omkhulu we-anabolic. Lo mmahluko unokuba negalelo ngqo kwiimpawu zecala ngasentla. Ubumnandi akayiyo, kodwa njengendlela engapheliyo embi kumzala wakhe wekhemikhali, i-Dienolone powder inikezela ngokusebenza okufananisiweyo kunye neenzuzo zobugcisa ngaphandle kokungathandeki.
I-Dienolone powder eluhlaza yenze ukuqhubeka kweembonakalo kwimarike yokuncedisa ngendlela ekhoyo, i-methylated, ne-precursor variants. Impumelelo yayo njenge-over-counter-"counter builder" ingaba yinto ebizwa ngokuba yi-Dienolone powder derivatives echazwa kakubi njenge-Trenbolone. Oku kungonakali kokuthengisa kunye nokusebenza kakuhle kwe-steroid kuqinisekisile impumelelo ye-Dienolone powder kunye ne-pro-hormone counterparts. Kwaye kwada kwaze kwaba yilapho iziphumo ezivela kwiimarike zizinto ezilawulwayo, nangona kunjalo, ukuba i-Dienolone powder eluhlaza ngokwayo yabona ukusetyenziswa okukhulu; I-Pro-Tren "izongezelo ezibanjelwe kuqala ukukhetha ngenxa yokusebenza kwizicelo zomlomo. Okumangalisayo kukuba, isakhiwo se-Dienolone esingaqinisekanga sasihlala singabikho naluphi na uluhlu olucacileyo "uludwe oluvinjiweyo." Lokhu kwanika ithuba elikhethekileyo lokulondoloza ukufumaneka kwalo kwabo bafuna ukuphucula ukusebenza.
Ukungabi naluphi na uqhotyoshelweyo lwe-methyl okanye utshintsho, isakhiwo se-Dienolone se-powder asikwazi ukulawulwa ngomlomo ngaphandle kokuthotywa okukhulu. Ukuze ukhuthalele, ukuthengiswa kweemarike kwakha imveliso yeemveliso esebenzisa abathinteli abathinteli njengendlela yokudlulela ukuphazamiseka kwe-hepatic. Ngaphandle kokusebenza kwezi nkqubo zokuhanjiswa kwe-transdermal, ukuphunyezwa kwe-DASCA kwakhuthaza iinkampani ezininzi ukuba zishiye i-pro-hormone. Ukunganeliseki ngeengxaki zokuncedisa abaxhasi bemveliso, ngoku ishishini elikhulayo lokuphanda iikhemikhali sele liqalise phambili kwizicelo zee-oli zeemveliso ezahlukahlukeneyo. Nangona uphando olunzulu lusetyenziswa kuphela, ezi zixazululo ezinamandla ziye zaba yi-godsend kulabo bafuna iindlela ezifikelelekayo kwiingxelo zabo "zeengcali".
I-Dienolone ye-powder yokuthengisa
Ngaba i-Dienolone ipowder eluhlaza Ingaba nayiphina imiphumo yangaphandle
Imiphumo emibi kunye neTrandzone ayifanayo xa isetyenziselwa ukuma yedwa, nangona inokuphakamisa uxinzelelo lwegazi kunye nokuguqula amanqanaba eepidid afana neyiphi na i-anabolic. Ngenxa kuyo ukuba i sendiselane ukuba Gyno dlala receptor kuya kubakho ithuba, kunjalo ingqokelela oku into ephakamileyo androgenic ezifana epistane okanye stanodrol kuya kunceda ekunqandeni this.With nayiphi steroid ingcibi okanye pro-hormone ziphumo bezingalindelekanga ukwenzeka, kwiimeko ezininzi bona ukhuselwa ngokulandela izikhokelo zokuxhasa umjikelezo. Oku kulandelayo uluhlu lwezinye iziphumo ezichaphazelekayo kunye neTranszone:
Ukunciphisa uLibido / Umsebenzi wezesondo
Ukuxhalabisa / Ukuvalelwa
Kwenyuka ukunyuswa kwengcinezelo yegazi
Impompo Ebuyile (Intlungu ebuhlungu emva emva / ngexesha lokusebenza)
Indlela yokuthenga i-Dienolone powder evela kwi-AASraw
I-Dienolone ipowder eluhlaza Iireyizi